Ngesandla Esiqinile ibhokisi lokufaka, ibhokisi lokufaka, ibhokisi lesipho - iHanmo
Khuthaza ilukuluku mayelana nobuciko bokubuka futhi ukujabulele.
Ukukhombisa nokuhumusha imisebenzi yobuciko ngekhwalithi evelele nokubaluleka komlando,
Njengo-manfacturer singasekela i-OEM, i-ODM ne-R & Dsolution.
Siqinisekisa ukuthi sinikezela ngomkhiqizo osezingeni eliphakeme nensizakalo kubo bonke ababambisene nabo.
Ngokukhiqizwa ngobuningi okwenza usuku lokulethwa lufushane kakhulu.
Kusukela ngo-2010, iHanmo imele ubuciko nekhwalithi. Sinikeza izixazululo zokupaka okukodwa zokupakisha nokunethezeka kwemikhiqizo yokunethezeka. Siyazi ngokujule ukuthi ukugqama esimweni sanamuhla sabathengi, kufanele ufinyelele ku "wow factor". Ngokuzinikela kweminyaka engaphezu kwe-10, uHanmo uyaziqhenya kakhulu ngekhono lethu lokusungula ukuze abambe ukunakwa kwabathengi.
Ikhwalithi Ehle yaseChina Isitolo esidayisa yonke impahla ...
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, iRussia ithole umkhiqizo omusha weLego Star Wars. Into esebhokisini lesipho iyindida, kepha kubukeka njengebhokisi elikhethekile elenziwe isitolo esiqinisekisiwe se-LEGO ngokubambisana ...
Yini inqubo yokwenza ngezifiso eyakho ...
Ukupakishwa kwelebuli kwangasese kuba yisigcawu esivamile kulezi zinsuku, kusuka enkampanini enkulu kuya kwibhizinisi elincane, bonke bafuna ukuzakhela igama lenkampani ngokufakwa kwalo. Njengoba ukupakisha kungu ...
Uma ukufakwa kwakho kungaboliseka kalula noma kubi ...
I-Eco-friendly manje iba umkhuba, abantu abaningi ngokwengeziwe bayayikhathalela usuku nosuku, njengoba sibhekene nokuphakamisa izinhlekelele ezibangelwa ukubhujiswa kwemvelo yithi uqobo. Okwethu, njengomkhiqizi we-pac ...
Ukupakisha kukhona njengokuvikela umkhiqizo wangaphakathi, kepha, ngokuthuthuka komnotho womhlaba, ukupakisha kufanele kungeze inani elengeziwe. Ukugqama esimweni sanamuhla sabathengi, u ...